UZuma kumele acacise ngombiko wemfundo yamahhala - DA | News24
UZuma kumele acacise ngombiko wemfundo yamahhala - DA
Cape Town – IDemocratic Alliance ithi uMengameli Jacob Zuma kumele acacise ekutheni umbiko wekhomishini kaHeher mayelana nemfundo yamahhala kuleli, uzosetshenziswa yini njengesisekelo uma uhulumeni esesungula imigomo ngesikhathi esizayo.
UZuma ngoMsombuluko ugcine ewudedelile umbiko obubhekwe ngabomvu ongamakhasi angu-752, wathi ihhovisi lakhe lisabheka izindlela zokusebenzisa izincomo zalo mbiko.
Kwesinye zezincomo ikhomishini kaHeher iveze ukuthi uhulumeni awunayo imali eyanele ukuthi uhlinzeke abafundi bakuleli ngemfundo yamahhala.
OLUNYE UDABA: Nakhu okuhlanu okugqamile embikweni wemfundo yamahhala
UZuma manje kumele acacise ukuthi lo mbiko uzodlala yiphi indima ezinhlelweni zakhe kuya phambili, kusho ilungu le-DA ePhalamende uBelinda Bozzoli, esho esitatimendeni ngoMsombuluko.
"Umengameli, osecubungule lo mbiko isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezimbili, kumele atshele abantu baseNingizimu Afrika ukuthi ngabe lo mbiko uzodlala yiphi indima ezinhlelweni zikahulumeni zokuzama ukuhlinzeka ngemfundo yamahhala," kusho uBazzoli.
ICity Press ibike ngeSonto ukuthi uZuma ubheka izindlela zokuthola u-R40bn odingekayo ngokuthi ehlise imali eya ezibonelelweni zikahulumeni kuphinde kwenyuswe i-Value Added Tax, nokuyinto engahambisani noMnyango woMgcinimafa.